ကမ္ဘာ့သတင်း - PNG MYANMAR
ဂျော့အက်ရှမန်အမည်ရှိ ငါးနှစ်သား ကလေးငယ် တစ်ဦး၏နဖူးတွင် အရုပ်ဆိုးလှသော မွေးရာပါ အမှတ်အသားတစ်ခု ပါဝင်လာရာ ယင်းနေရာ၌ အရေပြားကို အစားထိုး ကုသရန်အတွက် ကလေး၏ နဖူး၌ ဦးချိုသဏ္ဌာန် အရာနှစ်ခုကို ဆရာဝန်များက ထည့်သွင်းပေးခဲ့သည်။ သူ၏ မိခင်ဖြစ်သူ ကာရန် (၃၃ နှစ်) သည် မွေးရာပါ အမှတ်အသားကြီးကြောင့် ကျောင်းနေသည့်အခါ သူ၏သားငယ် လှောင်ပြောင်ခံရမည်ဆိုးသောကြောင့် အရေပြား အစားထိုးကုသမှု ခံယူစေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် လေးနှစ်သားအရွယ်တွင် သူ၏အမှတ်အသားနေရာ၌ အစားထိုးရန် အရေပြားရရှိစေရေးအတွက် ဆရာဝန်များက နဖူးတွင် ဦးချိုသဏ္ဌာန်နှစ်ခု ထည့်သွင်းကာ အရေပြားအပိုရရှိရန် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းမှရရှိသော အရေပြားကို မွေးရာပါ အမှတ်အသား နေရာ၌ အစားထိုးခဲ့ရာ ဂျော့၏နဖူး၌ အလွန်သေးငယ်သော အမာရွတ်တစ်ခုသာ ကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဂျော့တို့မိသားစုသည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဆမ္မားဆက်ပြည်နယ်၊ ရပ်ဒ်စတော့မြို့၌ နေထိုင်ကြောင်း သိရသည်။
နာတာလီဟေးဟက်စ် အမည်ရှိသုံးနှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးသည် အရာရာကို ဝါးစားတတ်သည့်အလေ့အထ စွဲလမ်းနေပြီး လျှပ်စစ်မီးသီး တစ်လုံးလုံးကိုပင် ကုန်အောင်ဝါးစား
ပစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ သူ့၌ အလွန်ထူးဆန်းသော စိတ်ရောဂါ တစ်မျိုးရှိပြီး မဟုတ်မဟတ်အရာများကို ဝါးစားနေရာ အဆိပ်သင့်နိုင်သည့် အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည် ဟုဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလက သူသည် သူ၏ အိပ်ခန်းအတွင်းမှ မီးသီးကိုခွဲကာ ဝါးစားသောကြောင့် အသက်အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရ သေးသည်ဟု ဆိုသည်။ အဆိုပါ မိန်းကလေး၌
Pica ဟုခေါ်သော ထူးဆန်းသော ရောဂါရှိရာ ကျောက်ခဲ ၊ တုတ်ချောင်း ၊ အလှစိုက်ထားသော အပင်များ ၊ လျှပ်စစ်မီးသီးအစ ရှိသည့် အစာမဟုတ်သော အရာများကို စားချင်စိတ်ပေါက်
နေလေ့ရှိသည် ဟုဆိုသည်။ နာတာလီ အကြိုက်ဆုံးအရာမှာ ကျောက်ခဲများနှင့် တုတ်ချောင်းများ ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ သူသည် အုတ်ခဲတစ် လုံးလုံးကိုပင် ချောကလက်ကဲ့သို့ ကုန်အောင်
ဝါးစားနိုင်သည် ဟုဆိုသည်။ သူ၏မိခင်ဖြစ်သူ ကောလင်း ( ၃၁ နှစ် ) သည် သူ၏သမီးအား အန္တရာယ်ရှိသော အရာများကို မစားမိစေရန် တစ်နေကုန် စောင့်ကြည့်နေရသည်ဟု ဆိုသည်။ အဆိုပါ
မိန်းကလေးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အင်ဒီယားနားပြည်နယ် တာရေးဟောင်တေး မြို့၌ နေထိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ခြေလက်လေးဖက်စလုံးမရှိသော်လည်း ခြေတုလက်တုများကိုသာမက မည်သည့်ကိရိယာများကိုမှ သုံးစွဲခြင်း မရှိဘဲ ပေပေါင်း ၁၉,၃၄ဝ မြင့်သည့် ကလီမန်ဂျားရိုးတောင်ကို တက်ရန်လေ့ ကျင့်နေ
အမေရိကန်နိုင်ငံသား ကီလီမေနက် (၂၅ နှစ်) သည် ခြေလက်လေးဖက်စလုံးမရှိသော်လည်း ခြေတုလက်တုများကိုသာမက မည်သည့်ကိရိယာများကိုမှ သုံးစွဲခြင်း မရှိဘဲ ပေပေါင်း ၁၉,၃၄ဝ မြင့်သည့် ကလီမန်ဂျားရိုးတောင်ကို တက်ရန်လေ့ ကျင့်နေကြောင်း သိရသည်။ သူသည် လာမည့်ဇန်နဝါရီလတွင် အာဖရိကတိုက်၏ အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်ဖြစ်သော ကလီမန်ဂျားရိုးတောင်ကို တက်ရန်လေ့ကျင့်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ သူသည် မွေးရာပါ မျိုးဗီဇ ပြဿနာကြောင့် တံတောင်ဆစ်အောက်၌ လက်များပါဝင်ခြင်းမရှိသကဲ့သို့ ဒူးအောက်ပိုင်း၌လည်း ခြေထောက်များ ပါဝင်လာခြင်းမရှိပေ။
အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့က ဂျာကူဇီအမည်ရှိ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များသည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ တောင်နှစ်ဖက်စွန်းကို ဆက်သွယ်ထားသည့် ဂူယာရို့ဇ် တံတားကြီးပေါ်မှနေ၍ ကြိုးများဖြင့်ဆိုင်းကာ စင်မြင့်တစ်ခု ပြုလုပ်လျက် ယင်းပေါ်၌ သူတို့သည် ရှမ်ပိန်များသောက်လျက် ပေပေါင်း ၅ဝဝ အမြင့်၌ တံတားမှနေ၍ စင်မြင့်ကိုကြိုးဖြင့်ဆွဲပြီး ပျော်ပွဲစားပြုလုပ်သောက်လျက် ကိတ်မုန့်များစားခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် သူတို့၏ စတန့်ပျော်ပွဲစားမှုကို နှစ်နာရီခွဲကြာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သူတို့၏ စင်မြင့်သည် မြေပြင်မှနေ၍ ပေ ၅ဝဝ မြင့်ပြီး တံတားမှနေ၍ ပေ ၁၃ဝ ကွာဝေးကြောင်း သိရသည်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦး ဆံပင်ဆေးဆိုးပြီး မိနစ် ၂ဝ အကြာ၌ သေဆုံး
ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့ညက တာဘာသာမက်ကုတ် အမည်ရှိ ၁၇ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးသည် ဆံပင်များကိုဆေးဆိုး ပြီးနောက် အလွန်အမင်းနာကျင်စွာ ခံစားရပြီး လဲကျသတိမေ့မြောပြီးနောက်သေဆုံးသွားကြောင်း သိရသည်။ သူသည် သူ၏သူငယ်ချင်းနေအိမ်တွင် ဆံပင်ကို ဆေးဆိုးပြီးနောက် အလွန်အမင်းနာကျင်လာသောကြောင့် ငယ်သံပါအောင် အော်ဟစ်ပြီး ထိုးအန်ကာ လဲကျသေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။သူ့အား လန်နက်ရှိုင်းယားဆေးရုံသို့ ပို့ခဲ့သေးသော်လည်း သေဆုံးခြင်းကိုသာအတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအရ အဆိုပါမိန်းကလေးတွင်ဆံပင်ဆိုးဆေး၌ပါသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါရောက်ဆိုက်နှင့် ဓာတ်မတည့်သော ရှားရှားပါးပါး ရောဂါ တစ်မျိုးရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဘီလ်ဂိတ်ဟာ ကမ္ဘာကျော်သူကြွယ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးစာရင်းမှာ နံပါတ်တစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ
(၁၃)ကြိမ်တိုင်တိုင် ဗိုလ်စွဲခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။သူဟာ ချမ်းသာလွန်းလို့နာမည်ကျော်သလိုလှူဒါန်းတဲ့နေရာမှာလည်း ကမ္ဘာကျော်ပါတယ်။
အချို့စာစောင်တွေက သူဟာ သူ့ပိုင်ပစ္စည်းရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ကိုလှူဒါန်းခဲ့ပြီးလို့လည်းဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့် အာဖရိကမှာရှိတဲ့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံများနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာလှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာ အမွေရလို့ချမ်းသာတာမဟုတ်သလို
ဝင်းဒိုး (Windows)-ဆိုတဲ့စကားလုံးကို လူတိုင်းကြားဖူး၊မြင်ဖူးကြမှာပါ။ကွန်ပျူတာကိုသုံးစွဲသူများဟာဘီလ်ဂိတ်ရဲ့ကျေးဇူးမကင်းသူများဖြစ်လာပါတယ်။
ကြက်ဥ ၁ဝဝဝ ကိုဦးထုပ်လုပ်ဝတ်ကာ ကမ္ဘာ့စံချိန်ချိုးခဲ့ကြောင်း
ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံ၏ ဝေးလံ သီခေါင် လှသော အရပ်ဒေသရှိ ရွာတစ်ရွာတွင် ရွာသားများသည် စက်တင်ဘာလ ၆ရက်နေ့က အလေးချိန် တစ်တန် (၁ဝ၇၅ ကီလိုဂရမ်) ရှိ မိကျောင်းကြီး တစ်ကောင် ဖမ်းမိ ခဲ့သည်။ အဆိုပါ မိကျောင်း၏ အလျားသည် ၂၁ ပေ (၆ ဒသမ ၄ မီတာ) ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဖမ်းဆီး မိခဲ့သမျှ မိကျောင်းများ အနက် အကြီးဆုံး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး အာကာသဆိပ်ကို ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်း တည်ဆောက်
Virgin ကုမ္ပဏီ၏ အာကာသယာဉ်များ ပျံတက်ရန် ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ပုဂ္ဂလိက အာကာသဆိပ်ကို ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်း တည်ဆောက် ပြီးစီးပြီ ဖြစ်ကြောင်း စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ သတင်းများက ဖော်ပြသည်။ Virgin ကုမ္ပဏီ၏ ပထမဦးဆုံး အာကာသ ခရီးစဉ်ကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် စတင်မည် ဟု ဆိုသည်။ သူဌေးကြီး ဆာရစ်ချက် ဘရန်ဆန်၏ Virgin Galactic ကုမ္ပဏီသည် နယူး မက္ကဆီကို ပြည်နယ် လက်စ်ခရူဆေး ဒေသရှိ မြေ အကျယ် ၁၈ဝဝ ဧကတွင် အာကာသဆိပ်ကို တည်ဆောက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ တည်ဆောက်မှုမှာ ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီး နေပြီ ဖြစ်ရာ အပြည့်အစုံ ပြီးစီးရန် အတွက် လ အနည်းငယ်သာ လိုတော့သည် ဟု ဆိုသည်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီမှ ပြောရေးဆို ခွင့်ရ အမျိုးသမီးက ကုမ္ပဏီ၏ ပထမဆုံး အာကာသ ခရီးစဉ်ကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၏ ပထမ သုံးလပတ် အတွင်း စတင် နိုင်လိမ့်မည် ဟု ဆိုသည်။
Cox ဟာ မွေးလာကတည်းက လက်နှစ်ဖက်လုံး မပါရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီလို မွေးရာပါ ဒုက္ခတ တစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း စိတ်ပညာဖြင့် ဘွဲ့ရထားတဲ့သူဖြစ်တယ်။
သူမဟာ စာရေးခြင်း၊ စာရိုက်ခြင်း၊ ကားမောင်းခြင်း၊ ခေါင်းလျှော်ခြင်း နှင့် ဖုန်းပြောခြင်းတို့ကို
သူမရဲ့ ခြေထောက်ဖြင့် အကုန်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Cox ဟာ အကမယ်ဟောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်သလို
တိုက်ကွမ်ဒိုအားကစား မှာလဲ ခါးပတ် အနက်ရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။
သူကိုတော့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးဖို့ အတွက်တော့ ကန့်သတ်ခြင်း ခံရပါတယ်။
သူဟာ လေယာဉ်ကိုမောင်းနိုင်သလို စာရိုက်တဲ့အခါမှာ တစ်မိနစ်ကို ၂၅ လုံး
သူမောင်းတဲ့လေယာဉ်အမျိုးအစားကတော့ Ercoupe လို့ခေါ်ပြီး
လေယာဉ်ဝဲယာထိန်းပဲ့တက်ပြား ခြေနင်းမပါသော်လည်း Jessica Cox ကတော့
ခြေထောက်နဲ့ လက်ကိုင်ကို ထိန်းပါတယ်။
ခြောက်လလောက် သူရဲ ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျှော့ခဲ့ရပြီး
အဆင့်သုံးဆင့်ကို သင်ကြားပြီး ၈၉ နာရီ လေ့ကျင့်ပျံသန်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လေယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရရှိသွားတဲ့ ပထမဆုံး လက်နှစ်ဖက် မရှိတဲ့ လေယာဉ်မောင်းသူ တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
လောကကြီးမှာစိတ်ပျက်အားငယ်တတ်ကြတဲ့သူတွေအထဲမှာမပါဘဲကိုယ့်မွေးရာပါအရည်အချင်းတွေနဲ့အနိုင်မခံအရှုံးမပေးဘဲ
လက်နှစ်ဖက်မပါသော်လည်း အတုယူဖွယ်ကောင်းသော ကြံ့ခိုင်သောစိတ်ဓါတ်ကိုဖြင့် မိမိ ဘ၀ကိုရပ်တည်နေတဲ့ ဒီညီမငယ်ကို
အင်္ဂါအစုံအလင်ပါပြီး ရေသာခိုအချောင်လိုက်နေတဲ့ ၊အားငယ်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ သူတွေအတွက်တော့တကယ့်သင်္ခန်းစာပါဘဲ။
ဒါကြောင့် ဒီက ညီမငယ်လိုပဲ ကျနော်တို့တတွေလည်း ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ၀ီရိယ မလျှော့ပဲ ကြိုးစားလိုက်ရအောင်။
စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးကပြောတယ်။ကျနော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းအစွမ်းအစရဲ့ဆယ်ပုံတစ်ပုံလောက်သာ ကျနော်တို့တွေ အသုံးပြုနေပါတယ်။တဲ့။
နောက်၉၀%ကို ကျနော်တို့တွေ အသုံးပြုရအောင်လားခင်ဗျာ။ လေးစားမိပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး နေအိမ်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သော ကားတစ်မျိုးကို တစ်စီးလျှင် စတာလင်ပေါင် ၁ ဒသမ ၉ သန်းဖြင့်ရောင်းချနေကြောင်းသိရသည်။
သြစတြီးယားကုမ္ပဏီ မာချီမိုဘိုင်းလ်က ဖန်တီးခဲ့သော ယင်းကားကြီးမှာ ပေ ၄၀ မျှ ရှည်လျားပြီး ရပ်နားထားစဉ်ဘေးနှင့် အပေါ်သို့ အခန်းချဲ့ထုတ်ပါက စတုရန်းပေ ၂၁၅ ပေ အထိရှိကြောင်း သိရသည်။ပင်မအိပ်ခန်းတွင် လက်မ ၄၀ ရုပ်မြင်သံကြားစက်ပါရှိပြီး အပိုအိပ်ခန်း၊ရေပန်းပါ ရေချိုးခန်း၊သီးခြား အိမ်သာ၊ကြမ်းပြင် အပူပေးစနစ်၊ အဖျော်ယမကာ ဘားများပါရှိသည်ဟု သိရသည်။
EleMMent Palazzo ဟု အမည်ပေးထားသော ကားတွင် မိုဘိုင်းအင်တာနက်စနစ်၊ မီးလင်းဖိုပါသော အလုပ်ခန်း၊ လုံခြုံရေးဗီဒီယိုစနစ်၊ ဂြိုဟ်တုတီဗွီများပါရှိသလို ညဘက်တွင် အန္တရာယ်ကင်းစေရန်အတွက် အမှောင်ထဲတွင် လင်းသည့် မီးစုန်းများ ကားနံရံတွင် အလှဆင်ထားသည်ဟု သိရသည်။
တန် ၂၀ မျှလေးသော ယင်းကားကြီးသည် အမြန်ဆုံး တစ်နာရီ ၉၃ မိုင်မျှ မောင်းနှင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဖန်တီးသူများကမူ ယင်းကားကြီးသည် ဖော်မြူလာဝမ်း ကားမောင်းသမားများ၊ ရော့ခ်စတားများ၏ နယ်လှည့်ခရီး အတွက် အသုံးတည့်မည်ဖြစ်သည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ အနီးရှိ ဆရီရာချာ တိရိစ္ဆာန်ရုံ
" အား !!!! " လို့ အော်မိမှာတော့ အသေအချာပါပဲ.... မြင်ကွင်းကတော့ မိန်းမလှလေးတစ်ယောက် တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန် မိကျောင်းကြီးတစ်ကောင်နှင့် အသက်ကိုရင်းပြီး အလောင်းအစားလုပ်နေသည့် အသည်းယားစရာအခိုက်အတန့်ပြကွက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်... အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်ရှိ လှပျိူဖြူလေးကတော့ အချိူသာဆုံးအပြုံးနဲ့သာမန်လူတစ်ယောက် တွေးပင်မတွေးဝံ့ လောက်သည့် လုပ်ရပ်အဖြစ် သေမင်းတမန် မိကျောင်းကြီး၏ ပါးစပ်အတွင်းသို့ သူမရဲ့ ဦးခေါင်းကို
ထည့်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်... သစ်သားအပိုင်းအစကလေးတစ်ခုကို အသုံးပြုကာ ထိုင်းမလေး တွင်ဂျိူင်ပင်ဆန် ဟာ မိကျောင်းကြီးကို၎င်းရဲ့ ပါးစပ်ကို ဟခိုင်းစေပြီး သူမရဲ့ ဦးခေါင်းကို ထိုပါးစပ်အတွင်း စက္ကန့် ၃၀ ကြာမျှထားပြ ခဲ့ ပါတယ်...
တစ်ကနေ သုံးဆယ်အထိ ရေတွက်ထားနော်... မတွေးရဲစရာပါပဲ...အခုနေများ မိကျောင်းကြီးနှာချေလိုက်ယင်.... Easy does it! Tueanjhai Pimsan stays completely at ease as she puts her head inside the Snappy's mouth forafull 30 seconds သူမနှင့် ရေသတ္တ၀ါတို့ ရဲ့ ဘုရင် မိကျောင်းကြီးတို့ အကြား နားလည်ယုံကြည်စိတ်ချမှုကြောင့်Snappy လို့တိစ္ဆာန်ရုံ ၀န်ထမ်းများကချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ မိကျောင်းကြီးရဲ့ ပါးစပ်ထဲကနေ မိန်းမလှလေး တွင်ဂျိူင် ဟာ အံ့သြစရာ ကောင်းလောက် အောင်ပင် ဘေးမသီရန်မခ၊ အထိအခိုက်မရှိ ပြန်ထွက်ပြနိုင်ခဲ့ ပါတယ်...အဆိုပါ မိကျောင်းနဲ့ လှပျိူဖြူလေးတို့ ဟာ မယုံကြည်နိုင်ဖွယ်ရာ ပြကွက်ကို တစ်ပတ်လျှင် နှစ်ကြိမ်မျှ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ အနီးရှိ ဆရီရာချာ တိရိစ္ဆာန်ရုံမှာ တင်ဆက်ပြသလျှက်ရှိနေပါတယ်...
မိန်းမချောလေးတွင်ဂျိူင် ကိုသူ့ ရဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းလှတဲ့ မတုန်မလှုပ်ဟန်နဲ့ တုံ့ ပြန်ခဲ့ ပေမယ့် Snappy မိကျောင်းကြီးကတော့ အစာစားချိန်မှာ ကြက်တွေကို အကောင်လိုက်ဝါးမြိုစားတတ်တဲ့အသားစားတိရိစ္ဆာန် ကြီး ဖြစ်နေပါတယ်..." ဒီလိုသရုပ်ဆောင်ရတိုင်း ကြောက်စိတ်မဖြစ်မိပါဘူး...ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့ ဒီလိုလုပ်နေခဲ့ တာနှစ် ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ တဲ့ အပြင် တစ်ခါမှလည်း ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရမှု မရှိခဲ့ လို့ ပါပဲ...လူအများစုကတော့ ဒီလိုလုပ်တာဟာ ရူးလို့ ၊ စိတ်မမှန်တဲ့ သူတစ်ယောက်ရဲ့ အပြုအမူလို့ ထင်မယ်ဆိုတာ ကျွန်မသိပေမယ့် ဒါဟာ ကျွန်မရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ် ဖြစ်သလို ဒီလိုစွန့် စားပြရတာကိုလည်း နှစ်သက် သဘောကျမိပါတယ်..."" ကျွန်မ ဒီမှာ အလုပ်လုပ်နေခဲ့ တာ ခြောက်နှစ်ရှိခဲ့ ပြီး ကျွန်မရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ၀မ်ချိူင်းလည်း ဒီမှာပဲ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်...ကျွန်မ မိကျောင်းတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ အခါ သူတို့ ကို စိတ်ချယုံကြည်ရပြီး လေးစားရပါတယ်... အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့ အမျှ သူတို့ ဘယ်လိုသွားလာလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာ သိရှိနားလည်လာပြီး သူတို့ ကလည်း ကျွန်မတို့ အကြောင်းကို သိရှိနားလည်သွားကြတာပါပဲ..." လို့ သူမကရှင်းပြခဲ့ ပါတယ်...
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နေထိုင်လျှက်ရှိတဲ့ အသက် ၅၀ အရွယ်ရှိ ဓါတ်ပုံဆရာ တိုနီဟန်းစ်ကုမ့် ဘ် ဟာ အဆိုပါ မိကျောင်းနဲ့ လှယမင်း တို့ ရဲ့ အံ့ ဖွယ်ရာ ပြကွက်ကို မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်..." ကျွန်တော့် ဖြင့် တစ်ခါမှ ဒီလိုမျိူးမမြင်ဘူးခဲ့ လို့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် စတွေ့ လိုက်ရတော့ အကြီးအကျယ်ကို အံ့ သြတုန်လှုပ်သွားခဲ့ ရပါတယ်... မိန်းကလေး တွင်ဂျိူင် နဲ့ ကြောက်စရာ မိကျောင်းကြီးတို့ အခုလို ဘာမှမဖြစ်ပဲ သရုပ်ဆောင်ပြနိုင်တာကိုက တစ်ကယ့် ကို မယုံကြည်နိုင်လောက်စရာ ကောင်းလှပါတယ်..." လို့ သူကထပ်ပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
မတော်လို့ များ မိကျောင်းက စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီး ကိုက်လိုက်ယင် ပြန်လမ်းရှိတော့ မှာမဟုတ်ဘူး...
သတိထားပါ မိတ်ဆွေ သိပ်မကြာသေးမီက အိမ်နီးနားချင်း India နိုင်ငံမှာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံတစ်ရုံတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ရုပ်ရှင်ရုံအတွင်းရှိ ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်လိုက်သောအခါ တင်ပါးတွင် ဆူးကနဲ
နာကျင်သွားသည်။ သူမထ၍ ထိုင်ခုံကို ကြည့်လိုက်သောအခါ ထိုင်ခုံတွင်
ဆေးထိုးအပ်တစ်ချောင်း နှင့် စာတစ်စောင်ကို တွေ့ရတယ်။ စာထဲတွင်
ရေးထားသည်ကား " သင်သည် HIV ပိုးကို ကူးစက်ခံလိုက်ရပါပြီ " တဲ့။
ပြင်သစ်ပြည်ရှိ ကျန်းမာရေးဌာနတစ်ခုမှလည်း အလားတူဖြစ်ရပ်များ
ရု့ပ်ရှင် ရုံများတွင်သာမက ဘဏ်ရှိ ငွေထုတ်စက်များတွင်ပါ HIV positive
ဖြစ်သော အပ်များကို တွေ့ရှိသည်ဟု India ရှိ ကျန်းမာရေးဌာနမှ
သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ ဒါကြောင့် သူတို့ဆီမှာ ရုပ်ရှင်ရုံတွေ ငွေစက်တွေမှာ
အသုံးပြုရင် အရမ်းသတိထားဖို့ လှုံဆော်မှုတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်။
အိမ်နီးနာချင်း နိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတာဆိုတော့ သတိထားသင့်တယ်ထင်လို့
ဖော်ပြလိုက်တာပါ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် မြန်မာတွေက အဲဒီလောက် စိတ်မပုပ်ဘူး
ထင်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ရုပ်ရှင်ရုံတို့လို အလင်းရောင် မကောင်းတဲ့နေရာမှာ
ထိုင်မယ်ဆိုရင် သတိထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ နောက်တစ်ချက်က ဒီမှာ
အမှိုက်သိမ်းတာ က စနစ်တကျမရှိတော့ အမှိုက်ပုံတို့နားကို ဖြတ်လျောက်သွားရင်
သတိထားစေချင်ပါတယ်။ ဆေးထိုးအပ်တွေ ထောင်နေတတ်တယ်။
နိုင်ငံတကာရောက်နေကြတဲ့ မြန်မာတွေလည်း သတိထားသင့်တယ်။ တစ်ကယ်လို့
အပ်ဆူးသွားရင်လည်း အရမ်းကြီးကြောက်မသွားပါနဲ့။ အပ်ဆူးတိုင်းလည်း
ပိုးမကူးတတ်ပါဘူး။ ပိုးဝင်သွားတိုင်းလည်း ဖြစ်ဖြစ်ချင်း ဆေးတစ်လ သောက်ရင်
၉၀ ရာခိုင်နှုန်း လောက် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့
ဒူဘိုင်းက ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံးအဆောက်အဦးဖွင့် ပွဲကျင်းပ
ဒူဘိုင်းက ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံးအဆောက်အဦးဖွင့် ပွဲကျင်းပ.... Monday, January 4, 2010 The world's tallest skyscraper opens inablaze of glory...ဒူဘိုင်းက ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံးအဆောက်အဦးဖွင့် ပွဲကျင်းပ....
ဒူဘိုင်းရဲ့ ကမ္ဘာကျော် တန်ဖိုးအကြီးဆုံးအဆောက်အဦးဖြစ်တဲ့ ပေပေါင်း ၂၇၁၇ ပေနဲ့ ကမ္ဘာ့ အမြင့် 
ဆုံးအဆောက်အဦးအဖြစ် စံချိန်တင်ခဲ့ တဲ့ အဆောက်အဦးကြီးကို မနေ့ ကပဲ ခန်းနားကြီးကျယ်စွာ
နဲ့ ဖွင့် လှစ်လိုက်ပါတယ်...
အစပထမကတော့Burj Dubai လို့ နာမည်နဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့ ပေမယ့်ယနေ့ ဖွင့် ပွဲကျမှပဲ
မမျှော်လင့် ပဲ အဆောက်အဦးရဲ့ အမည်ကို ယူအေအီးနိုင်ငံရဲ့ သမ္မတ၊ အဘူဒါဘီ စော်ဘွား ရှိတ်
ကာလီဖာကိုဂုဏ်ပြုပြီး Burj Khalifa လို့ နောက်ဆုံးဖွင့် ပွဲအချိန်ကျမှ ရုတ်တရက်ပြောင်းခဲ့ ပါတယ်...
ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကြောင့် ပေးဆပ်ရမယ့် အကြွေးတွေ အချိန်မှီ မပေးဆပ်နိုင်ပဲ ငွေကြေး
အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ဒူဘိုင်းအစိုးရကို အဘူဒါဘီအစိုးရက အရေးပေါ် ငွေကြေးအကူအညီအဖြစ်
ဒေါ်လာ ၂၄ ဘီလီယံ ပေးခဲ့ ပြီးနောက် ပြန်လည်ကျေးဇူးဆပ် အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ အဆိုပါ
အဆောက်အဦးကို အဘူဒါဘီ စော်ဘွားနာမည်အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
အနှစ်နှစ်အကာလ သူ့ အနေနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်တည်ဆောက်ခဲ့ ရတဲ့ကမ္ဘာမှာ အမြင့် ဆုံးအဆောက်
အဦးဟာ ဒူဘိုင်းကဖြစ်ပါတယ် လို့ သိသာအောင် Burj Dubai လို့ အမည် ပေးခဲ့ ပေမယ့် နောက်
ဆုံး ငွေရေးကြေးရေးအခက်အခဲ ဖြစ်လာတော့ရေနံနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့ အဘူဒါဘီ ကို မျက်
နှာအောက်ချပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့ ရကာ သူတို့ ကျေနပ်အောင် အဆောက်အဦးအမည်ကိုတောင်
အဘူဒါဘီစော်ဘွားအမည် ပြောင်းပေးခဲ့ ရတဲ့့ဒူဘိုင်းရဲ့ ယနေ့ ခေတ်မှီပုံရိပ်အဖြစ် ပဲ့ ကိုင်မောင်းနှင်
နေတဲ့ ဒူဘိုင်းစော်ဘွား ရှိတ်မိုဟာမက် ရဲ့ နာလိုခံခက်ဖြစ်နေခဲ့ ရမယ့် အခြေအနေကိုမြင်ယောင်မိ
အဆောက်အဦးတည်ဆောက်ခဲ့ တဲ့ ပိုင်ရှင် Emaar ကုမ္ပဏီ ကတော့ သူတို့ ရဲ့ အဆောက်အဦး
ဟာ သံမဏိအစိတ်အပိုင်းတွေချည်းနဲ့ မဟုတ်ပဲ အားဖြည့် ကွန်ကရစ်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထား
တာမို့အကြမ်းဖက်သမားများက လေယာဉ်နဲ့ တိုက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ ယင်တောင် အမေရိကန်က
ကုန်သွယ်ရေးအဆောက်အဦးလို လွယ်လွယ်နဲ့ ပြိုကျမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်....
ကုန်ကျငွေပေါင်း တစ်ဘီလီယံ ပေါင်စတာလင် ( အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၆ ဘီလီယံ ) ဖြစ်ပြီး
အမြင့် ပေ ၂၇၁၇ ပေ ရှိကာ အထပ်ပေါင်း ၂၀၀ ရှိတဲ့ အဆောက်အဦးအတွက် ဒူဘိုင်းက အာ
ရပ်ကုလားတွေ ဂုဏ်ယူမယ်ဆိုလည်း ဂုဏ်ယူထိုက်ပါပေတယ်...ဧည့် ပရိတ်သတ်ပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ တဲ့ ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံး
အထပ်ပေါင်း ၁၆၀ အထိ ရုံးခန်းတွေ၊ ၁၂၂ ထပ်မှာတော့ စားသောက်ဆိုင်နှင့့်အားကစားလေ့ ကျင့် ရုံ၊
မြေပြင်ကနေ ပေပေါင်း ၁၄၄၀ မြင့် တဲ့၁၂၃ ထပ်မှာတော့အမိုးအကာအောက်ကရေကူး
ကန်နဲ့ အမိုးအကာမဲ့ ရေကူးကန်....
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ဖွင့် ပွဲ...
အတွင်းပိုင်းက အခန်းဖွဲ့ စည်းပုံတွေ မပြီးသေးပေမယ့် လည်း ကမ္ဘာကို ကြွားချင်တာနဲ့ 
ရအောင်ဖွင့် ခဲ့ တယ်...
ကုလားအုပ်တွေ ပျော်မြူးတဲ့ ည...
ဒူဘိုင်းရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်မှု နဲ့ စက်မှု အင်အားကို ကြွားဝါချင်လို့ လား...
အလုပ်သမားပေါင်း ၁၂၀၀၀ အထိ သုံးစွဲပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ ရတယ်...
ကမ္ဘာ့ ပထမဦးဆုံး ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ Armani Hotel နဲ့ အဆင့် မြင့် ရုံးခန်း အဆောက်အဦ
အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ကမ္ဘာ့ စကိတ်ချံပီယံကလေး
အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ကမ္ဘာ့ စကိတ်ချံပီယံကလေး...
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ လူငယ်လေးတစ်ဦးဟာ အထိအခိုက်၊အရပ်မနားမရှိပဲကားအစီးပေါင်း ၂၀ အောက်မှဖြတ်ပြီး
ခြေထောက်များကိုကားပြီး၊ ခန္ဓာကိုယ်ကိုငုံ့ ကာ စကိတ်စီးအစွမ်းပြကာ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်....
ရိုဟန်အဂျစ်ကိုကိန်း အမည်ရှိကောင်လေးဟာ စကိတ်စီးပြီးခန္ဓာကိုယ်ကို ငုံ့ ကာအရှည်ဆုံးအကွာအဝေးအ
ထိအစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ သဖြင့် ဂင်းနက်စ်ကမ္ဘာ့ ထူးဆန်းမှတ်တမ်းစံချိန်အသစ်အဖြစ်တင်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်...
သူ့ လိုတော့ ဖြင့် လိုက်တုဖို့ မလွယ်...
သည့် အောက်မှဖြတ်ကာ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပင်အစွမ်းပြကာ ခြေထောက်များကို ကားပြီး၊ ခေါင်း
ငုံ့ ကာ စကိတ်စီးပြခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ကားများအောက်မှ ရိုဟန် ဖြတ်သွားနိုင်မည့် အမြင့် ပမာဏမှာ ၃၅ စင်တီမီတာမျှသာဖြစ်ပြီး ကားတစ်စင်း
နှင့် တစ်စင်းဟာလည်း ၂၀ စင်တီမီတာမျှသာကွာခြားရပ်တန့် ထားတာဖြစ်ပါတယ်....
သူ့ အနေနှင့်နောက်ဆုံးကားအထိရောက်ရန် စကိတ်စီးအစွမ်းပြသချိန်အားဖြင့်၃၀ စက္ကန့် မျှသာကြာမြင့် 
ယခင်ဂင်းနက်စ်မှတ်တမ်းစံချိန်ထက် ၂၆ ပေပိုမိုကွာဝေးသည့် စံချိန်အဖြစ် ၁၂၆ ပေ၊ ၁၁ လက်မ အထိ၎င်း
အနေနှင့် ရောက်ရှိစီးနင်းပြသနိုင်ခဲ့ သဖြင့် ရိုဟန် တစ်ယောက်ဝမ်းသာလွန်လို့ ခုန်ပေါက်မိသည်အထိဖြစ်
ခဲ့ ရပါတော့ တယ်...
ယောကျာင်္းလေးမို့ သာ တော်တော့ တယ်...
အသက် ၁၅ နှစ် နဲ့ အရပ် ၆ပေ ၁၁လက်မ ကျောင်းသားလေး
ကမ္ဘာ.အချမ်းသာဆုံးတိရိစ္ဆာန်များ.
ကမ္ဘာ.အချမ်းသာဆုံးတိရိစ္ဆာန်များ.... Sunday, January 31, 2010 ကမ္ဘာ.အချမ်းသာဆုံးတိရိစ္ဆာန်များ....
HERE'Sadog who's far from paw - Alsatian Gunther is worth 224million. ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံးခွေးကတော့ ပိုင်ဆိုင်မှုပေါင်း ပေါင်စတာလင် ၂၂၄ သန်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ( ၃၆၁ သန်း ) ဖြစ်ပြီး သူဟာ ပေါင်စတာလင် ၅၃ သန်း( ဒေါ်လာ ၈၅သန်း ) ကြွယ်ဝတဲ့ချင်ပန်ဇီမျောက်ဝံ ကာလူးနဲ့ပေါင် သန်း ၃၀
Just think how many bones Gunther IV could buy with the 224million he inherited from his dad's super rich owner. He owns several homes including Madonna's former Miami mansion. He also hasavilla in the Bahamas complete with butler. And you can forget Pedigree Chum - Gunther IV dines daily on caviar and steak.
Kalu now resides in his Cape Town estate in Africa. He inherited his millions after the divorce of famous swimmer Frank O'Neill and wife Patricia.